အီတလီမှာချစ်သူနဲ့ လျှောက်လည်နေတဲ့ပုံတွေတင်လိုက်တာကြောင့် အပြင်းအထန်ဝေဖန်ခံခဲ့ရလို့ စိတ်ထိခိုက်ပြီး ဆေးရုံတတ်နေရတဲ့ ရေချယ်တေဇ – Cele Snap
အီတလီမှာချစ်သူနဲ့ လျှောက်လည်နေတဲ့ပုံတွေတင်လိုက်တာကြောင့် အပြင်းအထန်ဝေဖန်ခံခဲ့ရလို့ စိတ်ထိခိုက်ပြီး ဆေးရုံတတ်နေရတဲ့ ရေချယ်တေဇ
September 2, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာနိုင်ငံတွင်အချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင်သူများထဲတွင်ဦးတေဇ.တစ်ဦးလည်းအပါအဝင်ပါပဲနော်။ .မြန်မာနိုင်ငံမှာရောဂါတွေထူပြောနေပြီး အရေးအခင်းတွေ. ဖြစ်နေတာကြောင့် သူ့ရဲ့ သမီး.အငယ်ဆုံးအဆိုတော် ရေချယ်တေဇ.ကို ပြည်ပနိုင်ငံမှာပဲ အခြေကျ… နေထိုင်စေ.ခဲ့ပါတ ယ်နော်။
ရေချယ်တေဇဟာလည်း အာဏာသိမ်း.ခံရစဉ်က သူ့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင်ဘာတစ်ခုမှ မတင်ခဲ့ပါ.ဘူးနော်။ဟိုတလောက သူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူ အီတလီမြို့က လမ်းမထက်မှာ အပျော်ကြီး ပျော်နေကြတဲ့ ပုံရိပ်တွေ ချပြပြီး နောက်ပြည်သူများရဲ့ ပြစ်ပြစ်နစ်နစ် ဝေဖန်ခြင်း တိုက်ခိုက်ခြင်းကို အပြင်းအထန်ခံခဲ့ရပါ တယ်
အခုဆို သူမတို့ စုံတွဲအား တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့် စိတ်ထိခိုက်ပြီး ရေချယ်တေဇဟာ ဆေးရုံရောက်နေကြောင်းသူမရဲ့FB mydayကနေအသိပေးလာခဲ့ပါတယ် စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကော သူမအပေါ် ဘယ်လိုမြင်လဲ မူရာမာယာများတာလားဆိုတာကို ထင်မြင်ချက်လေးတွေ ရေးခဲ့ပေး ပါနော်
ပရိသတျကွီးရေ မွနျမာနိုငျငံတှငျအခမျြးသာဆုံးစာရငျးဝငျသူမြားထဲတှငျဦးတဇေ.တဈဦးလညျးအပါအဝငျပါပဲနျော။ .မွနျမာနိုငျငံမှာရောဂါတှထေူပွောနပွေီး အရေးအခငျးတှေ. ဖွဈနတောကွောငျ့ သူ့ရဲ့ သမီး.အငယျဆုံးအဆိုတျော ရခေယျြတဇေ.ကို ပွညျပနိုငျငံမှာပဲ အခွကြေ… နထေိုငျစေ.ခဲ့ပါ တယျနျော။
ရခေယျြတဇေဟာလညျး အာဏာသိမျး.ခံရစဉျက သူ့ရဲ့ဆိုရှယျမီဒီယာမြားတှငျဘာတဈခုမှ မတငျခဲ့ပါ.ဘူးနျော။ဟိုတလောက သူ့ရဲ့ခဈြသူနဲ့အတူ အီတလီမွို့က လမျးမထကျမှာ အပြျောကွီး ပြျောနကွေတဲ့ ပုံရိပျတှေ ခပြွပွီး နောကျပွညျသူမြားရဲ့ ပွဈပွဈနဈနဈ ဝဖေနျခွငျး တိုကျခိုကျခွငျးကို အပွငျးအထနျခံခဲ့ရပါ တယျ
အခုဆို သူမတို့ စုံတှဲအား တိုကျခိုကျခွငျးကွောငျ့ စိတျထိခိုကျပွီး ရခေယျြတဇေဟာ ဆေးရုံရောကျနကွေောငျးသူမရဲ့FB mydayကနအေသိပေးလာခဲ့ပါတယျ စိတျမကောငျးဖွဈစရာကောငျးပါတယျပရိသတျကွီးကော သူမအပျေါ ဘယျလိုမွငျလဲ မူရာမာယာမြားတာလားဆိုတာကို ထငျမွငျခကျြလေးတှေ ရေးခဲ့ပေး ပါနျော
သူမအသက်(၃၀)ပြည့်မှာ အဖြစ်ချင်ဆုံးသော ကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကို ပရိတ်သက်တွေကို ပြောပြလာတဲ့ နေခြည်ဦး
သမီးလေးကို အရင်လိုမြင်ချင်နေပါပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်း ၀မ်းနည်းစွာရင်ဖွင့်လာခဲ့တဲ့ မင်းသမီးပိုင်ဖြိုးသုရဲ့ မိခင်